देउवा सरकारले पनि देखायो रेलमार्ग र जल यातायातको सपना
केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले देखाउँदै आएको रेलमार्गको सपना प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि जगाएको छ ।
फेरि सार्वजनिक यातायातको भाडा बढ्यो, कुन रुटमा कति?
सरकारले दुई महीना नबित्दै फेरि लामो दूरीका सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाएको छ।
आन्तरिक उडान ठप्प पार्ने वायुसेवा सञ्चालकको चेतावनी
वायुसेवा सञ्चालकले भोलिदेखि आन्तरिक उडान बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
साझाका नयाँ बिजुली बस अपाङ्गतामैत्री साझा यातायातले ल्याएका नयाँ बिजुली बस अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सहज रूपमा यात्रा गर्न सक्ने सुविधायुक्त छन्।
बागमती प्रदेशमा गाडी भाडा बढ्यो, नयाँ वर्षदेखि लागू हुने बागमती प्रदेश सरकारले काठमाडौं उपत्यका सहित प्रदेशभर चल्ने सार्वजनिक यातायातका साधनको भाडा बढाएको छ।
गाडी भाडा बढ्यो, कुन रूटमा कति? सरकारले लामो दूरीका सार्वजनिक यातायातका साधनको भाडादर बढाएको छ।
चिनियाँ विदेश मन्त्रीले पोखरा विमानस्थल हस्तान्तरण गर्दै, कति काम भएको छ? चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ यीले आज एक कार्यक्रमबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई निर्माणाधीन पोखरा विमानस्थल हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरिएको छ।
देशभरका यातायात कार्यालयको काम अनिश्चितकालका लागि बन्द देशभरका यातायात कार्यालयको कामकाज अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएको छ।
नेपाल एअरलाइन्सले पायो साउदी अरेबियाको उडान अनुमति नेपाल वायुसेवा निगमले साउदी अरेबियाको रियाद, दमाम र जेद्दा उडानको अनुमति पाएको छ।
पेट्रोलियम पदार्थमा फेरि मूल्यवृद्धि, पेट्रोल र डिजेलको भाउ अहिलेसम्मकै उच्च नेपाल आयल निगमले फेरि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ। निगमले शनिबार रातिबाट लागू हुने गरी पेट्रोल,डिजल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर रू.३ का दरले मूल्य बढाएको हो।
सार्वजनिक सवारी साधनमा जोर-बिजोर हट्यो कोरोनाभाइरसको तेस्रो लहर नियन्त्रणका लागि काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक सवारी साधनमा लगाइएको जोर-बिजोर प्रणाली हटेको छ।
हिमालय एअरलाइन्सले पायो आईएसओ प्रमाणपत्र हिमालय एअरलाइन्सले गुणस्तरीय व्यवस्थापन प्रणालीबाट आईएसओ प्रमाणपत्र पाएको छ।
हवाई भाडा पनि बढ्यो, कुन रुटमा कति वृद्धि?
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएसँगै हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीले पनि हवाई भाडा बढाएका छन्।
लामो दूरीका गाडी अझै १० दिन नचल्ने कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि गरिएको निषेधाज्ञाका कारण लामो दूरीका सार्वजनिक यातायातका साधन अझै १० दिन नचल्ने भएका छन्।